Warar - Maaddada miiska ee shiinaha lafta mid aad u fudud baa la hayaa?
Ingiriisku wuxuu ikhtiraacay weelka miiska shiinaha lafaha siddeed qarni. Kadib dhowr horumar oo adduunka ah, waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu caansan ugxaanta adduunka. Miisaska miisaanka lafaha ee Shiinaha ayaa shaki la'aan aad ugu habboon in lagu qurxiyo miiska arooska, maxaa yeelay lafuhu waa kuwo adag oo jilicsan, oo ku habboon guurka saafiga ah, aaminka ah iyo jacaylka. Maaddaama in ka badan saddex-meelood meel dambaska dhirta dhirta ah lagu daro dhoobada, shiinaha lafaha waxaa loogu magac daray ka dib muuqaalkiisa gaarka ah ee adkaanta iyo galaaska translucent. Iyada oo habka rasaasta u gaarka ah, wasakhda badan ee dhoobada ayaa la tirtiraa, taas oo keenta shiinaha lafo cad, jilicsan, hufan, khafiif ah, cillad yar, kana khafiifsan tanjir, muuqaal gaar ah oo nadiif ah
dareen Intaa waxaa dheer, lafaha sidoo kale waa mid aad u adag. Afarta lafood ee shaaha shiinaha ah ee giraangiraha Rolls-Royce, afartaan koob koob waxay taageeraan miisaanka uu RV ka baxsan karo!
Shiinaha shiidan lafaha cad ee kareemka ah waxaa badanaa lagu isticmaalaa miisaska arooska ee reer galbeedka. Waa dareen dabiici ah oo u gaar ah lafta dabiiciga ah, oo ay weheliso ubax aad u fiican iyo shimbir farjiin lagu rinjiyeeyay ama qaab qalooca oo u gaar ah, had iyo jeer waa miis aan caadi ahayn oo qurux badan. Mar haddii miisaska miiska lafaha Shiinaha iyo marada miiska ubax midabkeedu yahay midab khafiifka ah ama iftiinka ah, shumaca saafiga ah ee jacaylka leh ee ubaxa miiska ay la socdaan raadad, waxay ka soo muuqanayaan miiska sida codadka iftiinka, khadadka xarrago leh iyo dhadhanka fiican. Tani waa nooc aan dan ka lahayn oo xarrago leh, qaali ah, sida guurka dhaqanka laftiisa, xaaladaha caadiga ah, waxay u baahan tahay maareyn taxaddar leh iyo barwaaqo.
Maqaarka shiinaha lafaha waa tayo sare leh. Marka loo barbardhigo faleemka caadiga ah ee caadiga ah, shiinaha lafaha wuxuu leeyahay gudbinta iftiin wanaagsan, wuxuuna soo bandhigi karaa xarrago, dhalaal iyo nadiif saafi ah sida jaadka. Intaa waxaa sii dheer, shiinaha lafaha wuxuu leeyahay astaamaha balaastik sare, wuxuu ka dhigi karaa midabka dhalaalka dhalaalaya, midab midabaysan, iyo mid adag oo waara. Qalabka ugu muhiimsan: xirmooyin miis shiinaha lafihiisa ah, koobabka shiinaha lafaha; ku habboon dadka: xirmo ka kooban lafaha Shiinaha shixnad miis ah ayaa ugu habboon qoyska iyo saaxiibbadiisa inay dib isu soo noqdaan, qoyska oo dhami waxay leeyihiin cabitaan, waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa hadiyado loogu talagalay arooska iyo soo dhoweynta guriga ee qaraabada iyo saaxiibbada; qiimaha suuqa: xirmo ka sameysan miiska sheyga lafta waa miisaska Sare-dhamaadka guud ahaan wuxuu leeyahay qiime sare.
Miisaska miisaska leh qaababka birta, sida geeska dahabka, qarka qalinka, iwm, laguma dhejin karo microwave-ka; kuma xirna uumiyaha.